Prof. Jawaari ?Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay si dhab ah uga faa?iidaysato maal-gashiga? – Radio Daljir
Nofeembar 21, 2013 12:17 b 0
Kuwait, November 21, 2013 – Kuiwat waxaa weli ka socda shirka madaxda Afrika iyo kuwa Carabta oo intiisa badan looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka labbada dhinac, dowladda Soomaaliya ayaa shirka ku soo bandhigtay in ay diyaar u tahay maal-gashi.
Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo kulanka khudbad ka jeediyey goor dambe oo shalay, waxaa uu inteeda badan khudbada diirada ku saaray dhinaca horumarinta iyo fursadaha maal-gashiga ee dalka ka jira.
Prof. jawaari waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay ka faa?iidaysato cid walba oo doonaysa in ay maal-gashi ku samaysato Soomaaliya.
Waxaa uu Jawaari ku celceliyey in dowladda Soomaaliya ay si dhaba u damaanad qaadayso amniga iyo illaalinta ganacsiga iyo maal-gashiga ay dowladdaha caalamka ku samaysanayaan dalka Soomaaliya, isagoo furmad muhiim u ah Soomaaliya ku tilmaamay maal-gashiga.
Docda kale Prof. Maxamed sheikh Cismaan oo metelaya Madaxweynaha dalka, waxaa uu dalalka shirka jooga ka codsaday in ay gargaar la gaaran dadka masiibadu ku haleeshay xeebaha iyo dhulka taaga ah ee Puntland horaantii bisha oo ay duufaano ku dhufteen.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa horay u sheegtay in ay diyaarisay qorshe balaaran oo ay ku soo bandhigayso shirka maalmaha socda ee Carabta iyo Africa, kaas oo dhacaya markii saddexaad taariikhda, shirka waxaa aad loogu falan-qaynayaa horumarinta labbada dhinac.